Ko oyster peptides inogona kunyatsogadzirisa basa rechirume here?
1. Oyster kutarisisa
2. Chii chinonzi Oyster Peptide?
3. Oyster Peptide Mabasa Uye Kubatsira
4. Ndezvipi Izvo Oyster Peptide Zibatsiro Kana Achienzaniswa Nezvimwe Zvepabonde Kuwedzeredza Zvigadzirwa?
5. Nzira yekutora Oyster peptide poda? Oyster peptide dosage?
6. Oyster Peptide Side Mhedzisiro?
7. Oyster Peptide Powder application?
8. Mashoko ekupedzisira
Oyster, mhuka yemugungwa iyo inozivikanwa inowanikwa ye oyster kubvisa poda, yakave inodyiwa nevanhu vazhinji kwemakumi emakore. Unogona kuidya iri mbishi kana yakabikwa. Chero ipi neipi yaunosarudza, oyster nyama inozopa muviri wako nehuwandu hwezvinhu zvinovaka. Izvo zvinovaka muviri zvinosanganisira mapuroteni, mafuta ane hutano, zvicherwa pamwe nemavhithamini.
Chimwezve chinowedzera kune iyi nyama ndechekuti yakaderera mumakoriori.
Kune akawanda zvigadzirwa zvinogona kutorwa kubva oyster nyama, oyster peptide kuva imwe yacho. Muongororo iyi, tinotarisa oyster bioactive peptides uye kukanganisa kwavo kuita kwechirume, pakati pezvimwe zvinobatsira.
Chii chinonzi Oyster Peptide?
Oyster peptide chinhu chechisikigo chinobva kune oyster nyama protein kuburikidza nematanho-nhanho biotechnology. Iyo peptide yakapfuma mu zinc, calcium, taurine, pamwe nevhitamini A, B1, B2, B5, C, D uye E. Naizvozvo, inogona kushandiswa sehutano hwekudya kana chikafu chinoshanda. Iyo ine yakawanda yehutano hwekubatsirwa pakati pevanhu, kunyanya varume vane hutano hwepabonde.
Oyster bioactive peptides ine yakakwirira biological potency zvichienzaniswa nezvimwe zvakajairika oyster zvigadzirwa. Kunze kwezvo, oyster peptide ine rakakosha basa remuviri. Zvirinani, oyster peptide poda ane kuravira kwakanaka uye haana munhuwi wehove.
Oyster Peptide Mabasa Uye Kubatsira
Oyster peptide ine inotevera mabasa uye zvakanaka:
Iyo taurine inopihwa ne oyster peptide inogona kuvandudza kuvanzika kwe bile mumunhu. Uyezve, iyo oyster inotorwa inogona kudzivirira kusarerekera chokwadi kuunganidzwa kana kubvisa mafuta akaunganidzwa muchiropa. Izvo zviviri zvinoshanda zvinotsigira chiropa mukuita kwayo detoxization.
Kuvandudza kushanda kwepabonde
Iyo oyster peptide yakapfuma mune arginine, uye zvinhu zveZinc, izvo zviviri zvakakosha kune hutano hwepabonde hwemunhu. Inobatsira mukugadzirwa kwehomoni dzebonde, zvinosanganisira progesterone, testosterone uye estrogen.
Paunotora oyster peptide powder nguva dzose, iwe uchaona kuti iwe unenge uchinge uchinge uchinge uchinyanya kunaka kana kuti tsvarakadenga zuva nezuva. Izvi zvinodaro nekuti inopa muviri wako nezv zvinovaka zvinokurudzira ganda rako metabolism, ichiita kuti iratidzike ine hutano uye yakanyatsonwa hydrate.
Kunze kwezvo, iyi yakasviba furawa ine zvikamu zvinokurudzira ganda melanin kuora. Nekuda kweizvozvo, rako reganda toni inovandudza uye nekuwedzera zvakanyanya. Pamusoro pezvo, iodine uye tryptophan iri mu peptide inogona kuita kuti bvudzi rako riite dema, nekudaro rakawedzera kunaka.
Zviri nani kudzivirira zvirwere
Hutano hwe immune system yako hwakakosha pahutano hwako nekuti huya hunochengetedza muviri wako kubva kuzvirwere nezvirwere zvakasiyana. Zinc iri pakati pezvinhu zvakakosha izvo immune yako inoda kuve yakasimba uye inoshanda mukushanda kwayo.
Neraki, oyster peptide inopa muviri wako nehuwandu hwakafanira hwe zinc izvo izvo immune system inoda kuti urambe uchienda uchiisa hutachiona hutachiona uye mabhakitiriya pabhawa. Uyezve, iyo peptide inosimudzira kugadzirwa kwe thymulin nehormus gland. Iyo yakagadziriswa thymulin inotungamira kune zviri nani T-cell uye T4 Mubetsero wesero reganda, zvichikonzera kudzivirirwa kwakasimba kwemuviri.
Zvimwe zvezvirwere uye mamiriro ehutano aunogona kudzivirira nekutora oyster peptide dzinosanganisira:
Chirwere chehepatitis chisingaperi
Inodzivirira yemahara-yakakura kukuvara
Oyster inobuda, kusanganisira mapepuru, ine maantioxidants ayo anochengetedza masero emuviri uye tishu kubva mukukwiridzira. oxidative stress.
Oyster peptide zvakare ine amino asidhi, iyo, kunze kwekuvandudza basa rechiropa, inogona kutadzisa kuunganidzwa kwe lactic acid. Uyezve, iyo asidhi inobatsira mukuneta uye kwepanyama kutonhorera. Izvi zvinobatsira munhu kuti awane simba rakawanda uye ave akajeka uye azere nepfungwa mushure memamiriro ezvinhu anoshungurudza kana chirwere.
Oyster peptide inobatsira murume
Varume vane zvepabonde basa nyaya vanogona kubatsirwa zvakanyanya kubva kune oyster peptide. Izvi zvinosanganisira varume vane erectile dysfunction, kushaya simba, distended prostate kana genital hypoplasia, pakati pezvimwe chirwere zvechirume uye mamiriro. Oyster peptide inogona kuvandudza hutano hwavo hwepabonde.
Simba riri shure kwehutano hwepabonde kuvandudza kugona kweiyo oyster peptide ndeye yakakwira zinc yezvinhu, uchifunga kuti oyster ndiyo yakapfuma inowanikwa zinc. Izvo zinc zvirimo mu oyster zvakapetwa kagumi pane nyama tsvuku.
NeSainzi, zinc yakaratidzirwa kuti inowedzera danho re testosterone yemahara mumunhu. Kune rimwe divi, kushomeka kwe zinc zinc ndiko kunokonzeresa matambudziko emurume pabonde akadai erectile dysfunction. Izvi zvinodaro nekuti vanoshaya zinc yakakwana yekugadzira testosterone yekudzidzisa uye kuchengetedza sekondari mavara munhurume. Kunyanya, varume vane yakaderera testosterone vanoziva yakaderera libido uye zvepabonde kuita.
Pamusoro pe zinc, iyo oyster inobuditsawo ine huwandu hwakawanda hwevhithamini D, imwezve michero inobatsira muviri wemurume kuburitsa testosterone yakawanda. Izvo zvakare zvinonatsiridza tsandanyama kusimba uye chimiro.
Kunze kwezvo, oyster peptide yakapfuma mune arginine, kuteedzera zvinhu pamwe selenium, iyo yese inoita basa rakakosha mukugadzirwa kwemurume. Nekuda kweizvozvo, murume anoshandisa iyi oyster chigadzirwa inoona yakagadziriswa kubereka.
Saka, kana murume anotora oyster peptide, testosterone yake uye mazinga ekugadzirwa kwemurume anowedzera, nekudaro achivandudza hutano hwake hwepabonde. Nekuda kwesimba remuviri kuwanda uye kuwedzera testosterones, murume anokwanisa kuve nekukurumidza uye yakawanda libido. Zvakare, anogona kuchengetedza erection kwenguva refu.
Kunze kwekusaita bonde uye kusasimba, iri zvakare mushonga unoshanda wemamiriro evanhurume senge yakawedzera prostate uye genital hypoplasia. Ndicho chikonzero nei oyster extracts, kunyanya oyster peptide, yakave ichinyanya kushandiswa pakati pevarume kwemazana emakore-yekusimudzira kwehutano hwevarume zvepabonde.
Mhedzisiro yemupimo mumwe weoyster peptide dhesi inogona kugara kwemazuva manomwe kusvika gumi. Izvi zvinoreva kuti murume haafanire kutora chamuwedzera zuva nezuva kuti abatsirwe kubva pachirongwa chekuvandudza bonde. Anenge maawa gumi nemaviri mushure mekutora chikafu, murume anotanga kunzwa akasimba uye nekuda kurara naye.
Oyster peptide inobatsira vakadzi
Imwe yemabhenefiti akakosha eoyster peptide ndeyekuvandudza kwesimba kwemuviri. Saka nekudaro, kana mukadzi achiona antepartum kana kushaya simba kwekubereka achitora chinhu ichi, anonzwa kusimba.
Uyezve, kungofanana nevarume, vakadzi vanowanawo hutano hwakanaka hwepabonde mushure mekutora oyster peptide. Muviri wemukadzi zvakare unobereka testosterones asi mumazai.
Nekudaro, vakadzi veanopaopa vanowanzove vakadzikira mahosi, uye semugumisiro, ivo vanonzwa kushomeka kwemabido nekuoma kwechikadzi.
Neraki, iyo yekuwedzera iyo inopiwa zinc neye oyster peptide inokwirisa menoparance mukadzi testosterone level. Mhedzisiro yeiyi yakawedzera bonde drive uye zviri nani 'lubricated' vagina. Saka nekudaro, anozokwanisa kunakidzwa nebonde.
Ndezvipi Iyo Oyster Peptide Zibatsiro Kana Achienzaniswa Nezvimwe Zvekuvandudza Zvepabonde Zvigadzirwa?
Kusiyana nevakawanda kugadzirisa zvepabonde zvigadzirwa, oyster peptide haina mhedzisiro nekuti zvese-zvakasikwa. Kunze kwezvo, munhu haafanire kuitora zuva nezuva, sezvazvakaita nezvimwe zvigadzirwa zvekusimudzira zvepabonde. Mhedzisiro yeoyster peptide dosage inogona kugara kwemazuva manomwe kusvika gumi.
Oyster Peptide Extract Maitiro
Aya matanho anoteverwa kuti abvise oyster peptide kubva kune oyster nyama.
Nhanho yekutanga: Kurapa nyama necalcium munyu
Iyo oyster nyama iri pasi pamwe necalcium munyu uye nemvura. Izvi zvinoguma ne oyster nyama slurry. Nhanho yacho yakagadzirirwa kurisimudzira uye kusunungura endo native enzymes iri mu oysters. Nekuda kweizvozvo, iyo enzymatic gadziriro inobatanidzwa mune inotevera enzymatic hydrolysis inoderedzwa.
Nhanho yechipiri: Enzymatic hydrolysis
Iyo oyster nyama slurry inogadzirwa mudanho rekutanga inoiswa pasi enzymatic hydrolysis. Izvi zvinowanikwa nekusimudzira kutsvedza kusvika pa 35 ° C kusvika ku45 ° C kweinenge awa rimwe chete kana maviri. Zvadaro, poreseti yemapuroteni enzyme kana kunyange alkaline proteinase inowedzerwa kune yakasviba. Iko tembiricha yakachinjika kusvika pamakumi mashanu kusvika 50 ° C ekuti hydrolysis ienderere kwemaawa mashanu kusvika masere.
Mushure meizvozvo, iyo pH inogadziriswa kuva 5.0 kusvika 5.5, flavor proteinase inowedzerwa uyezve enzymatic hydrolysis inobvumirwa kuenderera kwemamwe maawa maviri kusvika matatu. Zvadaro, iyo yakakonzera supernatant inoiswa pakati pekuwana iyo isina mafuta oyster.
Nhanho 3: Kududzira nekunatsa
Iyo yakashandurwa kabhoni inowedzerwa kune yakasviba oyster mvura inowanikwa mudanho repiri. Iko kusanganiswa kunomutswa pamhepo yekushisa kubva pa45 ° C kusvika 55 ° C kwemaminetsi makumi matatu kusvika makumi matanhatu. Zvadaro, inogadziriswa uye inoshambwa neye ceramic membrane. Iyo inokonzeresa filita ndiyo yatinoreva senge yakacheneswa mhinduro ye oyster peptide.
Nhanho 4: Kuisa pfungwa uye kupuruzira-kuomesa
Iyo yakacheneswa oyster peptide mhinduro inosangana neinosvika makumi matatu neshanu muzana chikamu chakasimba kuburikidza nekwavo concertation Iyo inozopfurwa-yaomeswa kuti ibudise yakasimba oyster peptide iyo inonaka uye isina iyo inonhuwa yehove.
Nzira yekutora Oyster peptide poda? Oyster peptide dosage?
Iwe une sarudzo mbiri yekutora oyster peptide poda. Yekutanga iri kuizunza kumusoro mubhodhoro rine huwandu hwemvura uye kunwa kusanganisa. Neimwe nzira, iwe unogona kutora iyo yakaoma uye wozonwa imwe mvura yekuinyudza mukati medumbu rako.
Iko hakuna chaiyo yeti kipimo che oyster bioactive peptides. Nekudaro, avhareji mari inokurudzirwa nevamwe vanachiremba ndeye 500 mg, inotorwa kanokwana katatu pazuva. Nekudaro, nekuti ichi chisikwa uye chinowanzochengetedzeka chekudya chinowedzera, iwe unogona kugadzirisa iyo dhosi kumusoro kana pasi, zvichienderana nezvaunoda.
Oyster Peptide Side Mhedzisiro
Iko hakuna yesayenzi-yakatsanangurwa mhedzisiro yemafuta oyster peptide kana oyster peptide inobvisa. Izvi zvinonyanya kuitika nekuti chigadzirwa chakazara nemasikirwo, pasina zvingave zvinokuvadza ekugadzira zvinhu zvinowedzera kana zvinoshandiswa.
Nekudaro, vanhu vane chikafu chegungwa allergies vanogona kusangana nezvimwe zvehutano mushure mekushandisa oyster kubvisa. Naizvozvo, munhu anorwara neyegungwa allergy anofanira kudzivirira oyster zvigadzirwa, kusanganisira peptide.
Zvakare, vanhu vane pre-iripo hutano hutano vanorayirwa kuti vataure nevanoona nezvehutano vasati vatanga kutora zvigadzirwa zve oyster. Izvi zvichavabatsira kuti vadzivise mhedzisiro inogona kubuda kubva mukudyidzana pakati pey oyster uye mimwe mishonga iyo yavanenge vari kutora.
Kunze kwezvo, mamwe mamiriro ehutano ari kubuda anogona kunge achiwedzera nekuwedzera zinc inowanikwa mumuviri.
Oyster Peptide Powder Chikumbiro
Nekuda kweiyo pharmacological maitiro, oyster peptide poda yakaiswa mumushonga wehutano. Semuenzaniso, nekuda kweiyo kiriniki yakakosha dhata inosimbisa kugona kwe oysters kuratidza murume seramu, varume vazhinji vane hutano hwepabonde vanoshandisa chigadzirwa.
Uyezve, iyo yakasviba poda inoshandiswa pakunyora kweropa lipids uye mukudzivirira kweplatelet yekuunganidzwa. Iyo inokurudzirwawo kune vanhu vane hyperglycemia zviratidzo, kushoma immune kana hurombo metabolism sezvo ichivandudza hutano mamiriro.
Vanhu vane kenza vanokwanisa zvakare kutora hupfu hwekutarisira zviri nani kwechirwere. Iyo oyster chigadzirwa chinogona kudzivirira cancer maseru kuti asapararire. Iyo poda inogona kushandiswawo pakurapa maronda uye moyo weasidhi simba rekuvandudza.
Zvimwe zvinoshandiswa zve oyster peptide poda zvinosanganisira:
Semushonga wekukudza zvikanda zvepamberi
Kunyanya kukwegura kudzivirira
Uyezve, iwe unogona kushandisa oyster peptide poda sekuwedzera chikafu. Inotapira yakanaka uye hairume 'hove' sezvimwe zvigadzirwa zvegungwa. Kunze kwezvo, iyo yakapfuma mune zvinovaka muviri izvo muviri wako unofanirwa kuve nehutano. Saka nekudaro, inogona kuva yakanaka yekupedzera kune zvako zvawaida kudya.
Oyster peptides, ekuwedzera e oyster, akachengeteka zvakanyanya ma supplements anogona kushandiswa kwakasiyana hutano hutano. Imwe yemabhenefiti ndeye kushanda kwechirume. Aya ma peptides anogona kuwedzera libido mumurume ane low sex drive uye sperm count yevanhurume vane nyaya dzekubereka. Menopausal vakadzi vanoona yakaderera bonde dhiraivha uye ukadzi kuoma kunogona kubatsirawo zvakanyanya kubva oyster peptide inobvisa.
Chen, D., Liu, Z., Huang, W., Zhao, Y., Dong, S., & Zeng, M. (2013). Kucheneswa uye kuoneka kwe zinc-inosunga peptide kubva ku oyster protein hydrolyzate. Zvinyorwa zveHinctional Foods, 5(2), 689-697.
Qian, ZJ, Jung, WK, Byun, HG, & Kim, SK (2008). Inodzivirira mhedzisiro ye antioxidative peptide yakanatswa kubva mudumbu mekudya oyster, Crassostrea gigas inopesana nemahara radical yakanyengerera kukuvara kweDNA. Bioresource technology, 99(9), 3365-3371.
Umayaparvathi, S., Meenakshi, S., Vimalraj, V., Arumugam, M., Sivagami, G., & Balasubramanian, T. (2014). Antioxidant chiitiko uye anticancer mhedzisiro ye bioactive peptide kubva ku enzymatic hydrolyzate ye oyster (Saccostrea cucullata). Biomedicine & ekudzivirira Nutrition, 4(3), 343-353.
Xiaochun, XIAO, Xufeng, ZHAI, Guo, X., Yongjun, LOU, & Wah, C. (2017). US Patent Chikumbiro Nhamba 15 / 542,743.
Zeng, M., Cui, W., Zhao, Y., Liu, Z., Dong, S., & Guo, Y. (2008). Antiviral inoshanda peptide kubva ku oyster. Chinese Chinyorwa che Oceanology uye Limnology, 26(3), 307-312.